PressReader - Ilanga langeSonto: 2019-01-06 - IZICHUSE ZABE-ANC KUGUJWA IMINYAKA EWU-I07 YASUNGULWA
IZICHUSE ZABE-ANC KUGUJWA IMINYAKA EWU-I07 YASUNGULWA
ITHEKU selikulungele ukwamukela izinkulungwane zamalungu E-ANC azobe ezokwethamela umgubho omkhulu waminyaka yonke WE-ANC obizwa ngejanuary 8.
Lokhu kuvezwe ngunkk Weziwe Thusi, obemele uhulumeni wakwazulu-natal ngesikhathi kwethulwa izichuse zomengameli nabanye abaholi baleli qembu njengoba ligubha iminyaka engu-107 nonyaka.
Lezi zichuse ziseceleni komgwaqo onguthelawayeka, u-m4 ngaseDurban North lapho kunepaki encane esiphenduke indawo yokuqhakambisa amagugu. Eduze kwezichuse ezinomengameli, kuphinde kube nesikankk Winnie Madikizela-mandela nesikankk Albertina Sisulu.
Unkk Thusi ophinde abe ngungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kulesi sifundazwe, uthe itheku lisaqhubeka nokubonisa ukuthi liyindawo ekwaziyo ukwamukela abantu abaqhamuka ezindaweni ezahlukene kuleli.
“Siyethemba ukuthi abazobe behambele umcimbi kajanuary 8, bazophatheka kahle ethekwini,” kusho unkk Thusi. Lezi zichuse kubikwa ukuthi ngeke zihlale kule ndawo unomphela, kodwa zizolokhu zishintshwa njengoba zizohambisana nokwenzeka ngaleso sikhathi.
KUSUKELA kwesokunxele ngunkk Noluthando Magewu, umnu Thembinkosi Ngcobo, unkk Zama Sokhabase abayizikhulu kumasipala wetheku, bephahle unkk Weziwe Thusi ongungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi Kwazulu-natal.